भारतका दुई राज्यको सीमा क्षेत्रमा ६ प्रहरी जवान मारिए – Bikash Khabar
भारतका दुई राज्यको सीमा क्षेत्रमा ६ प्रहरी जवान मारिए
Top News अन्तर्राष्ट्रिय
मंगलबार, १२ साउन २०७८ गते १०:२८ मा प्रकाशित	Author Pradip Adhikari	Comment(0)	100 Views
१२ साउन । भारतको असममा स्थानीय नागरिक र प्रहरीबीच झडप हुँदा ६ जना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ।
भारतमो असम र मिजोरम राज्यको सीमामा सोमबार नागरिक र प्रहरीबीच झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले आफ्नो राज्यका ६ जना प्रहरी जवानले सिमानामा भएको झडपमा ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले ज्यान गुमाउने प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। साथै उनले परिवारमा समवेदना प्रकट गरेका छन्।
घटनाले आफूलाई ठूलो चोट पुर्याएको भन्दै उनले दोषीमाथि कारबाही गरिने बताएका छन्।
भारतका दुई राज्यबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चल्दै आएको छ। ६ जना प्रहरी जवानको ज्यान गएलगत्तै भारतको केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित साहले दुवै राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई शान्ति स्थापनाको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
असम र मिजोरम राज्यबीच औपनिवेशिक कालदेखि नै सीमा विवाद रहँदै आएको छ। मिजोरम पहिला असम राज्यकै हिस्सा थियो।
आज विश्व बालश्रम दिवश, कतिछन् त विश्वभर बालश्रमिक !
काठमाडौं,२९ जेठ । ४ वर्षको अवधिमा विश्वभरि बालश्रमिकको संख्या ८४ लाखले वृद्धि भएको छ। यो संख्यामा वृद्धि भएर हाल विश्वमा
गण्डकीका सांसद कृष्ण थापाको रिट चुडालको एकल इजलासमा
काठमाडौं,२३ जेठ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले हेर्ने भएको छ। जनमोर्चाले
१० भदौ,काठमाडौँ । शेयर बजार नेप्से परिसूचक बिहीवार उकालो लागेको छ । आज नेप्से १७.५७ अङ्कले उकालो लागेर ३०९४.०१ विन्दुमा
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक आज बस्दै